ရမ္မက်ပြင်းတဲ့ချစ်ခြင်း - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ရေးသားသူ – အဖြူရောင်
“ဖောင်း… ဖောင်း… ရှီး… ဖောင်း”
သီးတင်းကျွတ် လပြည့်ကျော် တစ်ရက်နေ့ ညလေးက မိုးတိမ်သားကင်းကင်းနဲ့ ကြည်လင်တောက်ပနေသည်။ ရပ်ကွက်ထဲက ကလေးငယ်တွေရဲ့ ဗျောက်ဖောက်သံက ရပ်ကွက်တစ်ခုလုံး ဟိုမှသည်မှ သောသောညံနေသည်။
“မညီးပါဘူး သမီးရယ် ဖေဖေတို့ ငယ်ငယ်ကလဲ ဒီလိုပဲ ကစားကြတာပါပဲ”
ဝရံတာကနေ အိမ်ထဲကို ဝင်လာရင်း ဘေးက စတီခုံလေးမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်တဲ့ ချွေးမလေးကို ဦးထွန်း လှမ်းကြည့်ပြောလိုက်မိသည်။
“အဖေ့သားနဲ့ မြေးကတော့ ရေကျော်ပွဲဈေး သွားကြပြီ”
“မလိုက်ချင်ပါဘူး အဖေရယ် လူအရမ်းများတာ သူတို့သားအဖပဲ ဝါသနာပါတယ်လေ”
ပြောပြီးတော့ နောက်ဖေးဖက် ထွက်သွားတဲ့ ချွေးမလေးကို ဦးထွန်း ငေးနေမိသည်။ မိန်းမဆုံးပြီးကတည်းက ရွာကအိမ်မှာ တစ်ယောက်ထဲ နေနေရာကနေ သားနဲ့ချွေးမလေးက ရန်ကုန်ကို ဘုရားဖူးခေါ်လို့ ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြောရဦးမယ် ကျွန်တော့် အသက်က အခုတန်ဆောင်မုန်းဆို ၄၈ နှစ် ပြည့်ပြီ။ ရွာမှာတော့ မိန်းမနဲ့ ကုန်စုံဆိုင်လေးဖွင့်ရင်း ဘဝကို ရပ်တည်ခဲ့ကြတာ။ သားဖိုးလုံးကလည်း အားကိုးရပါတယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမ ဆုံးသွားတော့ ဘာမှမလုပ်တော့နဲ့ဆိုပြီး သူပဲထောက်ပံ့ထားတာလေ။ ဒီကောင့်ကို ရန်ကုန်မှာ ကျောင်းထားဖို့ ရွာမှာ လင်မယားနှစ်ယောက် ခြို့ခြံချွေတာပြီးတော့ နေခဲ့ရတာ။ ကျောင်းပြီးတော့ အလုပ်ဝင်ရင်းနဲ့ အလုပ်ရှင်ရဲ့ သမီးနဲ့ ညားတော့တာပါပဲဗျာ။ ဒီကောင်သိတတ်လို့သာပေါ့။ အိုဇာတာ ကောင်းတယ်ပဲ ပြောရမယ် ထင်တယ်။ အခုတော့ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ရပဲ ဘုရားသွားကျောင်းတက်ပေါ့။ အခုလဲ အဖေ ရန်ကုန်လာနေဆိုတာနဲ့ တစ်လနှစ်လ ရောက်လာခဲ့တာ တောသားဆိုတော့လည်း ကိုယ့်ရွာပဲ ကိုယ်ပျော်တယ်လေ။ ခင်ရာဆွေမျိုး မြိန်ရာဟင်းကောင်း ဆိုသလိုပေါ့။
ရွာမှာက ကိုယ့်ဆွေကိုယ့်မျိုးလို ဖြစ်နေကြပြီဆိုတော့ ဒီကောင်တွေ ရန်ကုန်တော့ တယ်မကြိုက်လှပါဘူးဗျာ။ ၂၅ ပေ၊ ပေ ၅၀ အိမ်ခန်းထဲမှာ အိမ်ခန်းက သုံးခန်း၊ နောက်ဖေးရေချိုးခန်း အိမ်သာဆိုပေမဲ့ တယ်ပြီးကျဉ်းကြပ်လှတယ်။ ပြီးတော့လဲ အဲယားကွန်းဆိုတဲ့ဟာကလည်း အေးပြီး လတ်ဆတ်နေတဲ့လေနဲ့ ဇိမ်တော့ကျပါရဲ့ ကျုပ်တော့ ရွာက လေလောက် မကြိုက်လှဘူးရယ်။
ပြီးတော့ ဒီရန်ကုန်ရောက်မှပဲ ကျုပ်စိတ်လည်း ဘယ်လိုဖြစ်တယ် မသိပါဘူး။ ရွာမှာတော့ အားလုံးက ရိုးရိုးရယ်လေ။ ဒီကမိန်းကလေးတွေက စကတ်ကြပ်ကြပ်ထုပ်ထုပ်နဲ့ တစ်ချို့ဆို အတွင်းက ဘောင်းဘီအရာလေးတောင် ထင်းလို့။
ဒါနဲ့ ပြောရဦးမယ် ကျုပ်ချွေးမလေးနာမည်က အိဖြူကျော်တဲ့ဗျ။ တရုတ်မြန်မာ ကပြားမလေးပေါ့။ ဖိုးလုံး ကျောင်းပြီးတော့ ကောင်မလေးမိဘရဲ့ ပလပ်စတစ်ဆိုင်မှာ ဝင်လုပ်ရင်းနဲ့ ရိုးသားကြိုးစားတယ်ဆိုပြီး သူတို့သမီးနဲ့ ပေးစားလိုက်တော့တာပါပဲ။ ဒီကောင်က တောသားသာဆိုတာ လူပုံက ရည်ရည်မွန်မွန်ကိုး..။
ကျုပ်ချွေးမလေးကလည်း မြို့သူဆိုတော့ ဝတ်တတ်စားတတ်တယ်လေ။ ခုတော့ သူတို့သား ကျုပ်မြေးတောင် ၅ နှစ်ထဲဝင်လို့ ကျောင်းတက်နေပြီ။ ဖိုးလုံးအသက်က ၂၈ အိဖြူလေးကတော့ ၃၂ ထဲတောင် ဝင်ပြီထင်တယ်။ တစ်သားမွေးတော့ တသွေးလှ ဆိုသလိုပဲ အသားက ဖြူဖြူတုတ်တုတ် ပြည့်ပြည့်နဲ့ နိုးအုံကြီးတွေဆို တင်းရင်းအိစက်လို့ပေါ့။
လူကပြည့်တော့ ထမီစကတ်များ ဝတ်လိုက်ရင် ဆီးခုန်အိအိလေးက တင်းပြီး မို့နေတော့တာပဲ။ အရပ်ကတော့ ၅ ပေ ၄ လောက် ရှိမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်သားရဲ့ မိန်းမဆိုတော့လည်း စိတ်ကိုချုပ်တီးပြီး နေရတာပေါ့ဗျာ။
“ဖေဖေ အိပ်ချင်ရင် အိပ်တော့လေ”
တစ်ယောက်ထဲ တွေးနေရင်းနဲ့ ဘယ်အချိန်က ထွက်လာတယ် မသိတဲ့ ချွေးမလေးက ဘေးကနေ ပြောလာတယ်။
“အေးအေးသမီး ခြေလက်ဆေးပြီး အိပ်တော့မယ်”
ဒီလိုနဲ့ ကျုပ်လည်း ဘယ်အချိန်ထိ အိပ်ပျော်သွားလဲ မသိပါဘူး ညဖက်တရေးနိုးတော့……
“ဟင်း…. ဟင်း… ဖြေးဖြေးလုပ်လေ ဟိုဖက်မှာ အဖေရှိနေတာကို”
တစ်ချက်တစ်ချက် တိုးတိုးလေး ကြားလိုက်ရတဲ့ အသံကြောင့် ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ်လည်း နိုးနေတယ်လို့ မထင်ရအောင် အသာငြိမ်ပြီး နားထောင်နေမိတယ်။ ကျုပ်သိလိုက်ပါတယ်။ ဖိုးလုံးတစ်ယောက် သူမိန်းမကို လိုးဖို့ နှူးနေရင်က ထွက်လာတဲ့ အသံဆိုတာ။ နားထောင်နေရင်းနဲ့ ကျုပ်စိတ်တွေ လှုပ်ရှားလာမိ တယ်။
ကျုပ်လည်း အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူပဲဟာ ပြီးတော့ ပုထုဇဉ်ပဲလေ ရဟန်းနာမှမဟုတ်ပဲ။ မိန်းမဆုံးပြီးကတည်းက ဒီလိုမဖြစ်ရတာကြာနေတဲ့ ကျုပ်စိတ်တွေက ကိလေသာ သွေးတွေကြောင့် လန်းဆန်းသလို ခံစားလာမိတယ်။ ကိုယ့်သားလင်မယား လိုးဖို့ ပြင်နေတာ မကြည့်သင့် မကြားသင့်ဘူး ဆိုပေမဲ့ အခုလို မထင်မှတ်ပဲ ဆုံရတော့လည်း မျက်ကွယ်ပြုလို့ မရပြန်ဘူး။
“ဖေဖေကြားမယ်… ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ မောင်ကလဲ”
“အိပ်နေပါပြီ အိလေးရာ မကြားပါဘူး”
“အာ… ဒါတော့ဒါပေါ့ မကြားအောင်လုပ်မှ တော်ကြာ ကြားသွားရင် ရှက်စရာကြီး”
“အာ…. မောင်…… ဖြေးဖြေးဆို…. အားကျွတ်… ကျွတ်…. ကျွတ်”
ခပ်တိုးတိုးပြောနေပေမဲ့ အခန်းနံရံပေါ်က လေဝင်ပေါက် ပွတ်လုံးတိုင်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ အတိုင်းသား ကြားနေရတယ်။ တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ ပါးစပ်နဲ့ စုပ်နေတဲ့ အသံတွေ အိဖြူလေးရဲ့ ခပ်တိုးတိုး ငြီး သံလေးတွေက ကျုပ်ရင်ကို ဆူပွက်လာစေတယ်လေ။ မျက်စိနဲ့ မမြင်ရပေမဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ ပုံဖော်ကြည့်နေမိတယ်။ အိအိရဲ့ လုံးကြီး ဆူဆူဖြိုးဖြိုး တစ်တစ်ခဲခဲ ကိုယ်လုံးလေးကို ဖိုးလုံးတစ်ယောက် စိတ်ရှိလက်ရှိ ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်နေပုံတွေ ကျုပ်မျက်စိထဲမှာ တစ်ရေးရေး မြင်ယောင်နေမိတယ်။
မိန်းမအရသာသိနေတဲ့ ကျုပ်အတွက်တော့ နို့အုံးတစ်တစ်၊ ခါးသိမ်သိမ်၊ စွန့်ကားနေတဲ့ တင်အိအိတွေနဲ့ ချွေးမလေးကို ကြည့်ပြီး ကျုပ်လီးတောင်ခဲ့ရတာ အကြိမ်ကြိမ်။ အဲ့ဒါကိုပဲ ကျုပ်က ကြိုက်နေမိတာ တစ်ကိုယ်လုံး တစ်သိမ့်သိမ့်နဲ့ ရမက်သွေးတွေ နိုးကြွနေတာကိုက အရသာလေ။ အပြာကားတွေ ကြည့်သလို ပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်ကတော့ အပြာကားထက် ပိုကြိုက်တယ်။ အပြင်မှာ တစ်တစ်ရစ်ရစ်ကြီးကို မှန်းပြီးတော့ ကိုယ်စိတ်ကြိုက် ပုံစံမျိုးစုံ လိုးလို့ရတယ်လေ။ ရုပ်ရှင်ဆိုတာ သူလုပ်ပြတာပဲ ကြည့်ရတာကိုး…။
“အို….. ဖြေးဖြေးဆို မောင်ကလည်း အတင်းပဲ….. အို…. ဟိုး… ဟိုး……”
အိဖြူလေး အသံက ကျုပ်ရင်ကို တော်တော်ဆူဝေလာစေတယ်။ အတော်လေးကြာတော့ တကျွီကျွိနဲ့ ကုတင်လှုပ်သံလေးတွေ ကြားလိုက်ရတယ်။ ကျုပ်သိလိုက်တာပေါ့…..။ ဖိုးလုံးတစ်ယောက် အိဖြူလေးကို လိုးနေပြီဆိုတာ။ ကျုပ်စိတ်ထဲမှာလေ အိဖြူကျော်ရဲ့ ဆူဖြိုးအိတစ်နေတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးပေါ်မှာ ထပ်ပြီးတော့ အားအင်အပြည့်နဲ့ လိုးနေမဲ့ ကျုပ်သားကို မြင်ယောင်ရင်း ကျေလဲကျေနပ် မနာလိုလည်း ဖြစ်နေမိတယ်။ တစ်ယောက်ထဲ ငြိမ်နေရတဲ့ ကျုပ်ကတော့ တင်းမာနေတဲ့ ကိုယ်လီးကို ကိုယ်ဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့ အိဖြူလေးကို မှန်းဆနေမိတာပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်လည်း မိန်းမလိုးချင်တာပေါ့ မလိုးရတာ ကြာပြီလေ ကျုပ်မိန်းမ သေပြီးကတည်းက ဆိုပါတော့…။
ကျုပ်သားကတော့ ကံကောင်းတာပဲ ဆူဖြိုးတောင့်တင်းတဲ့ မြို့ကြီးသူကို လိုးခွင့်ရတယ်ဆိုတာ နည်းတဲ့ကုသိုလ်လားဗျာ။ အဓိကကတော့ ကိုယ့်မိန်းမကို ကောင်းကောင်းကျေနပ်အောင် လုပ်ပေးဖို့ပဲဗျ။ လီးပါရုံ တက်လိုးတတ်ရုံနဲ့ မိန်းမယူလို့ မရသေးဘူးလေ။ ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်က အတန်းပညာသာ ပြီးအောင်မတတ်တာ ဒီလိုပညာမျိုးတော့ ဆရာတစ်ဆူပဲ။ စောက်ဖုတ်ထဲ လီးထည့်ထားရုံနဲ့ ကျေနပ်မှုရတယ်ဆိုပေမဲ့ ယောက်ျားက ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်လေ မိန်းမက ကျေနပ်သာယာလေပဲလေ။
ကျုပ်တွေးနေရင်းနဲ့ပဲ တဖက်ခန်းက အသံတွေက ပိုကျယ်လာတယ်။ ခဏနေတော့ ကျုပ် ကြားလိုက်ရတာ အိဖြူလေးရဲ့ အသံပေါ့။
သူတို့နှစ်ယောက် အသံတိုးတိုးလေး ဆိုပေမဲ့ ကျုပ်ဆီက အတိုင်းသား ကြားနေရတယ်။ ကျုပ်လေ တကယ့်ကို အားမရပါဘူးဗျာ။ ဘယ့်နှယ် မိန်းမလိုးတယ်ဆိုတာ လေးငါးမိနစ်နဲ့ ဘာအရသာရှိမှာလဲ။ ဒီကောင်ဖိုးလုံးက ဆေးလိပ်လည်း သောက်တော့ သိပ်အမောခံနိုင်ပုံ မရဘူး…။ ကျုပ်ချွေးမလေး ကျေနပ်ရဲ့လား မသိပါဘူးဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ကျုပ်လည်း ဘယ်တတ်နိုင်မလဲလေ။ လိုးနေတာ ဖိုးလုံးပဲဟာ ကျုပ်မှ မဟုတ်ပဲ။
အင်းလေ.. စောစောပြီးတော့လည်း စောစောအိပ်ရတာပေါ့။ ကျုပ်ငြိမ်နေရင်းနဲ့ ခဏနေတော့ ဖိုးလုံးရဲ့ ဟောက်သံကို ကြားလိုက်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ လှုပ်ရှားနေတဲ့ အသံတော့ ကြားနေရတုန်းဗျ။ ကျုပ်သိလိုက်ပါတယ် အိဖြူလေး အိပ်မပျော်ဘူးဆိုတာ….။ အင်း ဘယ်တတ်နိုင်မလဲလေ။
အဲ့ဒီညကစပြီးတော့ နောက်ညတွေ ကျုပ်တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်ဘူးဗျ။ သူတို့လင်းမယား လိုးတာကို စောင့်စောင့် နားထောင်နေမိတယ်။ အိဖြူလေးက ရုပ်ရည် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် ကြည့်ကောင်းသလို လင်ကိုလည်း ဂရုစိုက်ရှာသား…။ လင်နဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ တော်ရတဲ့ ယောက္ခမအပေါ်လဲ ကိုယ့်မိဘလိုပါပဲဗျာ။ ကျုပ်အပေါ်လည်း ဂရုစိုက်ရှာပါတယ်။ မနက်မနက်ဆို နွားနို့လဖက်ရည် မပျက်စေရဘူး။ ကျုပ်သာ သူလေးအပေါ် သမီး လေးလို သဘောမထားနိုင်တာ။
ဖိုးလုံးက နေ့ဖက်ဆို အလုပ်သွား ကျုပ်မြေးကလည်း ကျောင်းသွားဆိုတော့ အိမ်မှာ ကျုပ်နဲ့ အိဖြူ နှစ်ယောက်ထဲလေ။ အဓိက သူရေချိုးတဲ့ အချိန်ပေါ့ ထမီလေး ရင်လျားပြီး တစ်ခါတစ်လေ ကျုပ်ရှေ့မှာ တံမြက်စည်းလှည်း ဖုန်စုပ်ဆိုတော့ ကုန်းကုန်းကွကွပေါ့။ အဲ့လိုအချိန်ဆို သူ့တင်ပါး အိအိကြီးတွေက ထမီပါးပါးထဲမှာ လုံးတစ်နေလိုက်တာ။ ကျုပ်ဖြင့် အာခေါင်တွေ ခြောက်ပြီး လီးဆိုတာ အစွမ်းကုန် တောင်နေတော့တာပဲ။
ပြီးတော့ ရေချိုးခါနီး အဝတ်လျှော်ပြီးလို့ အိမ်ရှေ့ဝရံတာမှာ အဝတ်လှမ်းရင် ကျုပ် မသိမသာ ခိုးကြည့်ရတာ အမောပေါ့။ မြို့ဆိုတော့ တောလို နေရာကျယ်ကျယ် မရှိဘူးလေ။ သူ့ဘော်လီလေးတွေ အတွင်းခံလေးတွေ တွေ့ရင် ကျုပ်ဖြင့် အခန်းထဲ ဆွဲသွင်းပြီး လိုးလိုက်ချင်တော့တာပဲ။ သူဘာအရောင်လေးတွေဝတ်လည်း ကျုပ်တောင် အလွတ်ရနေပြီ။ တစ်ခုတစ်လေ ကျုပ် သူမသိအောင် လျှော်ပြီးလို့ ခြောက်နေတာလေး သွားသွားကိုင်ကြည့်မိတယ်။ အနက်လေးတွေ အနီလေးတွေ ပန်းရောင်လေးတွေ ပြီးတော့ ဇာလေးတွေရောပဲ…. အဲ့ဒီဘောင်းဘီလေးတွေနဲ့သာဆို ကျုပ်ချွေးမလေး တော်တော်လှနေမှာဗျ။
ဒီလိုနဲ့ ကျုပ်လည်း နေ့ဖက်ဆို အိဖြူလေးအပေါ် ဖောက်ပြန်စိတ်နဲ့ သာယာလိုက်၊ ညဆို သူတို့လင်မယား လိုးတာ နားထောင်လိုက်နဲ့ မြို့မှာနေတာ တော်တော် ကြာသွားတယ်။ သူတို့လင်မယားက ညတိုင်း လိုးတာတော့ မဟုတ်ဘူးရယ်။ လိုးတဲ့ညဆိုရင်တော့ ကျုပ်အတွက် အခွင့်ကောင်းပေါ့ဗျာ။ လိုးတဲ့အခါတိုင်းလဲ ဖိုးလုံးတစ်ကောင် အရင်ပြီးလို့ အိပ်တာက များနေတယ်။ ကျုပ်တော့ အားမရတာရော စိုးရိမ်တာရောပေါ့။
စိုးရိမ်တယ်ဆိုတာက ဒီလို။ မိန်းမမျိုးက ယောက်ျားမပေးနိုင်တာကို အခြားနည်းနဲ့ ဖြည့်ဆည်းတတ်တယ်လေ။ အိလေးကို လိုးချင်ပေမဲ့ သူတို့မိသားစုလေးတော့ မထိခိုက်စေချင်ဘူးရယ်။ ကျုပ်သား မိသားစုကိုဗျ။ ကျုပ်လည်း စိတ်တထင့်ထင့်နဲ့။
တစ်နေ့ပေါ့ ကျုပ်ထင်တဲ့ အတိုင်ပဲဗျာ။ အိဖြူ ဈေးကနေ ဆွဲခြင်းလေးနဲ့ ပြန်လာတာကို ဝရံတာကနေ ကျုပ်မြင်တော့ တံခါးဖွင့်ပေးဖို့ တံခါးဆီလာခဲ့ရင်းနဲ့ တံခါးရှေ့ရောက်တော့ စကားပြောသံလိုလို ကြားမိတာနဲ့ ကျုပ်လည်း ငြိမ်ပြီး နားထောင်နေမိတယ်။ ပြီးတော့မှ သတိရတော့ တံခါးကနေ အပြင်ကို ချောင်းလို့ရတဲ့ မှန်လေးကနေ ချောင်းကြည့်မိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကျုပ်ရင်တွေ တဒိုင်းဒိုင်း ခုန်သွားမိတယ်။ ဒေါသထွက်တာရော စိတ်လှုပ်ရှားတာရောပေါ့။
ကျုပ်မြင်လိုက်ရတာက မျက်နှာချင်းဆိုင် အခန်းက ကောင်လေးရယ်ဗျ။ ရှိလှ အသက်က ၁၇ ၁၈ ပေါ့။ အိဖြူလေး တက်လာတော့ သူတံခါးလေးကိုဟပြီး စောင့်နေတယ်။ အခန်းရှေ့ရောက်တော့ အိဖြူက သူ့အခန်းဝမှာရပ်ပြီး စကားပြောနေတာ။ ဘာတွေပြောနေလဲ မသဲကွဲပေမဲ့ ကောင်လေးလက်က ချွေးမလေးရဲ့ ဖင်ကို ထမီစကတ်တင်းတင်းလေး ပေါ်ကနေ ကိုင်လိုက်တာ ကျုပ်တွေ့လိုက် ရတယ်လေ။ ကျုပ်သားတိုက်ခန်း လှေကားက တံခါးမရှိတော့ မှောင်ရိပ်က များနေတယ်။ ဒါကပဲ သူတို့အတွက် အခွင့်အရေးပေါ့။
ထမီစကတ်လေးပေါ်ကနေ ဖင်အိအိလေးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ပွတ်နေတာများ ဈေးခြင်းတောင်းလေးက ဘေးမှာချလို့ပေါ့။ အိဖြူလေးက ကောင်လေးရင်ခွင်ထဲမှာ ဖက်လို့။ သူ့တီရှပ် ကြပ်ကြပ်လေးထဲက တင်းအိနေတဲ့ နို့တွေဆိုတာ ရင်ခွင်နှစ်ခုကြားမှာ အိဝင်နေလိုက်တာ။ ကျုပ်လည်း ကြည့် ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်နေမိတာ ဒေါသစိတ်တောင် ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိပါဘူးဗျာ။ ဖက်ထားရင်းနဲ့ အိဖြူလေး နှုတ်ခမ်းကို ကောင်လေးက စုပ်နေတယ်ဗျ။ ကြည့်လို့တော့ကောင်းသား…။
အိဖြူလေးက ကောင်လေး လီးရှိတဲ့ နေရာကို သူ့ဆီးခုန်မို့မို့လေးနဲ့ အတင်းကို ဖိကပ်ပြီး ဖက်ထားနေလိုက်တာ။ တော်တော်ကြာကြာလေး နမ်းပြီးတော့မှ ချွေးမလေးက သူအင်္ကျီကြပ်ကြပ်လေးကို ခါးကနေ ဆွဲဆန့်ချပြီးတော့ ကောင်လေးကို တိုးတိုးလေး ပြောနေတယ်။ ကျုပ်လည်း တံခါးကနေ ခွာပြီးတော့ စတီပေါ်မှာ မှင်သေသေနဲ့ ပြန်ထိုင်နေရတေ့ာတာပေါ့။ ခဏနေတော့ တံခါးသောဖွင့်သံနဲ့အတူ ပွင့်လာတဲ့ တံခါးရွက်လေး နောက်ကနေ အိဖြူလေး ပေါ်လာတယ်။
“ဖေဖေ အစောကြီး နိုးနေတာလား”
ခုံမှာထိုင်နေတဲ့ ကျုပ်ကို အံ့သြဟန်နဲ့ ကြည့်ရင်း ပြောလာတဲ့ စကားကို ကျုပ်လည်း မသိသလို ပြန်ဖြေမိလိုက်တယ်။
“အင်း အိပ်မရတာနဲ့ နိုးလာတာ သမီးရေ”
“ဒါဆို ရေမိုးချိုးတော့လေ မနက်စာ စားရအောင်”
ကျုပ်လည်း တောင်နေတဲ့လီးကို ပေါင်ကြားမှာ ညှပ်ထားရင်းနဲ့ တိုတိုပဲ ဖြေလိုက်မိတယ်။ အဲ့ဒီနေ့ကတော့ ကျုပ်စိတ်တွေ တော်တော်ကို ကစဥ့်ကလျားပဲ။ ကျုပ်နားလည်ပါတယ် အလိုမပြည့်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ဒါမျိုး ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ။
အဲ့ဒီညက သူတို့လင်မယား လိုးကြတယ်ဗျ။ မနက်က အိဖြူကို ကျုပ်မြင်ပြီးကတည်းက ချွေးမလေးအပေါ် အရင်ကထက် ပိုပြီး ရဲလာမိတာတော့ အမှန်ပဲ။ ထင်းခွေမကြုံ ရေခပ်ကြုံတယ်ဆိုတဲ့ စကားပုံလိုတော့ အခြေအနေကို စောင့်နေတဲ့ ကျုပ်အတွက်တော့ အဲ့ဒီည သူတို့လင်မယား လိုးနေတဲ့အချိန် ရေအိမ်သွားသလိုလိုနဲ့ နောက်ဖေးဖက်ကို ထွက်လာခဲ့မိတယ်။ အိမ်သာထဲကထိုင်တဲ့ ကြွေခွက်ပေါ်မှာ ထိုင်ရင်း ကျုပ်ပုဆိုးထဲက တင်းမာနေတဲ့ လီးကိုထုတ်ပြီးတော့ တစ်ယောက်ထဲ ဂွင်းတိုက်နေခဲ့မိတာပေါ့။ အိမ်သာတံခါးကို တမင်ပဲ ခပ်ဟဟ ဖွင့်ထားခဲ့တယ်။
ခဏနေတော့ ကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အိဖြူလေး တစ်ယောက် နောက်ဖေးဖက်ကို ဝင်လာတဲ့ အသံကို ကျုပ်ကြားလိုက်ရတယ်။ ကျုပ်လက်က စောစောကထက် ပိုလှုပ်ရှားနေမိတာပေါ့။ ကျုပ်သိနေတယ် လေ တံခါးဟဟလေးကနေ သူကြည့်နေမယ်ဆိုတာကိုပေါ့။
နောက်နေ့မနက် အိဖြူလေး ကျုပ်အပေါ် ဆက်ဆံပုံက ပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူမျက်လုံးတွေကတော့ ကျုပ်နဲ့ အကြည့်ချင်းဆုံမှာ ကြောက်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ သေချာပြီပေါ့။ ကျုပ်ကို သူ မနေ့ညက မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ။ ပြီးတော့ ထူးထူးခြားခြား အရင်နေ့တွေက နေ့လည် သူ့အခန်းထဲမှာ တံခါးပိတ်ပြီးတော့ အိပ်တတ်တဲ့သူက ဒီနေ့မှာ အခန်းတံခါးကို ခပ်ဟဟ ဖွင့်ထားတာ တွေ့ရတယ်။ ကျုပ်လည်း နောက်ဖေးဖက်ဝင်သလို အိမ်ရှေ့ထွက်သလိုလိုနဲ့ ကြည့်ရတာ အမောပေါ့။
အဲ့လိုနဲ့ တစ်ကြိမ်တော့ ကျုပ်အခန်းထဲကို လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ အချိန် ကျုပ်ကို ပြန်ကြည့်တဲ့ အိဖြူလေးနဲ့ မျက်လုံးချင်း ဆုံသွားမိတယ်။ ကျုပ်လည်း…
အခန်းတံခါးလေးကို ဟရင်း မေးလိုက်တော့
ကျုပ်လည်း တဒိန်းဒိန်းခုန်နေတဲ့ ရင်ထဲက နှလုံးခုံသံကိုတောင် ကြားနေမိသလိုပါပဲ။ အခန်းထဲ ရောက်သွားတော့ သူအိပ်နေတဲ့ ကုတင်ပေါ်က မွေ့ယာစွန်းလေးမှာ ထိုင်လိုက်တယ်။ ပန်းရောင်မွေ့ယာစွပ်လေးပေါ်မှာ အိအိထွေးထွေး ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ လှဲနေတဲ့ သမီးလေးက အိမ်နေရင်း ထမီအနီရောင် ပျော့ပျော့လေးနဲ့ပေါ့။ ထမီပျော့ပျော့လေးပေါ်ကနေ အတွင်းခံဘောင်းဘီ အရာလေးကလည်း ထင်းနေလိုက်တာ။ အပေါ်က တီရှပ်အဖြူရောင် ပွပွလေးနဲ့ ဖြူဝင်းဝင်း အသားလေးက ထင်းနေအောင် တောက်ပနေသလိုပါပဲ။ ပုံပြင်ထဲက နတ်သမီးလေးလိုပေါ့ဗျာ။
တုံချီတုန်ချနဲ့ အတော်ဝေခွဲမရ ဖြစ်နေတဲ့ ကျုပ်လဲ တစောင်းလေးကနေ ပက်လက်အနေအထား ပြင်အိပ်လိုက်တဲ့ အိဖြူကြောင့် မနေနိုင်တော့ပဲ မွေ့ယာလေးပေါ် အသာလှဲရင်း ချွေးမလေးရဲ့ ကိုယ်လုံးအိအိလေးကို ခပ်တင်းတင်း ဖက်ထားလိုက်တော့တယ်။
ဆိုပြီးတော့ တိုးတိုးလေပြောတဲ့ ချွေးမလေးရဲ့ အသံလေးကိုပါ ကြားလိုက်ရတယ်။
တဲ့…။ ကျုပ်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတာ သိထားပြီးဖြစ်တဲ့ အိလေးက ကျုပ်ကို အသာလေးတွန်းရင်း ခပ်တိုးတိုးလေး ပြောရှာတယ်။
“ဖေဖေ မနေနိုင်တော့ဘူး သမီးလေးရယ် သမီးလေးကို မြင်ရတာ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘူး။ သမီးကို လိုးပါရစေကွယ်… နော်”
ကျုပ်ခပ်ရဲရဲပြောရင်း မို့မို့လေး ဖောင်းနေတဲ့ ချွေးမလေးရဲ့ ပါးလေးကို နမ်းလိုက်မိတယ်။
“အို…. ဟင်… ဟင့်… ဟင့်အင်း …. မကောင်းပါဘူး ဖေဖေရယ် သွားပါနော်…. သမီး ကြောက်တယ်”
“ကွယ် သမီးလေးကလည်း ဘာကြောက်စရာရှိလဲ… သမီးယောက်ျားလည်း လိုးနေတာပဲ… ပြီးတော့ ဟိုဖက်ခန်းက ကောင်လေး”
“ဟင် ဖေဖေ…. ဖေဖေ ဘယ်လိုသိလဲ”
ကျုပ်တိုးတိုးလေးပြောရင်း ချွေးမလေးရဲ့ ပါးလေးနှစ်ဖက်ကို လေးငါးကြိမ် နမ်းနေမိတယ်။ လက်ကလည်း ထိမိတဲ့ အသားစိုင်အိအိလေးတွေကို ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးနေမိတယ်။ တင်ပါးနဲ့ ပေါင်တံလေးတွေက အိတင်းနေတာကြောင့် ကျုပ်လက်နဲ့ ထိ လိုက်တိုင်း အိခနဲ အိခနဲပေါ့။ ပါးလေးကို နမ်းနေရာကနေ ချွေးမလေးရဲ့ လည်တိုင်အိအိတွေကို ပြီးတော့ လက်မောင်းထွေးထွေးလေးတွေကိုပါ အစဉ်လိုက် နမ်းနေမိတာပေါ့။ နမ်းနေရာကနေ အိလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးပေါ် ကျုပ်နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ဖိချလိုက်တော့ အိလေး တစ်ကိုယ်လုံး ကော့တက်သွားခဲ့တယ်။
တံခါးပေါက်မရှိတဲ့ တိုက်ခန်းလေးက မီးပိတ်ထားရင် ညဖက်လိုပါပဲ။ အခန်းလေးက ခပ်မှောင်မှောင်ရယ် ပြီးတော့ အိမ်ထဲမှာ သူနဲ့ကျုပ် နှစ်ယောက်ထဲရယ်။ ကျုပ်အတွက်တော့ တကယ့်ကို လောကနိဗာန်ပါပဲ။ မွေ့ယာအိအိလေးပေါ်က နတ်သမီးလေး …. အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျုပ်ချွေးမလေးဆိုတဲ့ စိတ်တောင် မရှိတော့ဘူးဗျာ။ ယောက်ျားအရသာ သိနေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် အထိအတွေ့ဆိုတာကို ဘယ်လွန်ဆန်နိုင်ပါ့မလဲ။ နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းနေရင်းနဲ့ ကျုပ်လက်တွေက အိဖြူရဲ့ နို့အုံတင်းတင်းတွေပေါ်ကို ဖိဆုပ်ရင်း ပွတ်နယ်နေမိတော့တယ်။
“အား….. ဖေဖေရယ် …. အိုး… ကျွတ်… ကျွတ်… ကျွတ်…..”
ချွေးမလေး ဘယ်လောက်တောင် ကာမဇောတွေ ထန်နေပြီလဲဆိုတာ ကျုပ်သိတာပေါ့။ ကျုပ်စိတ်ရှိသမျှ အပေါ်ပိုင်းကို ဆွပြီးတော့ ခါးက ထမီလေးကို ဆွဲလိုက်တော့ သူလေးလေ အလိုက်သင့်လေး ခါးလေး ကော့ပေးရင်း တွန်းချွတ်ပေးရှာတယ်။ ထမီလေး မရှိတော့တဲ့အချိန် ကျုပ်မြင်ဘူးနေကျ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ပန်းရောင်လေးက အိဖြူလေးရဲ့ ခါးထက်မှာ တစ်ရစ်အိစက်နေတဲ့ ဖင်လုံးလေးတွေကို ပွေ့ထုပ်ထားတယ်။ တီရှပ်အဖြူလေးက အပေါ်ကို လန်တက်နေတော့ ဝင်းဝါအိ ထွေးနေတဲ့ အသားစိုင်လေးတွေပေါ်မှာ ထင်းထင်းလေး ဖြစ်နေတဲ့ ဘော်လီအသားရောင်လေးက ပနံရနေတာပေါ့။
ကျုပ်ဘဝမှာ ကံကောင်းတယ်ပဲ ပြောရမယ် ထင်တယ်။ အခုလို မြို့သူချောချောလေးကို လိုးခွင့်ကြုံတာကိုပေါ့။ တီရှပ်အဖြူလေးကို ကျုပ်ချွတ်ပေးတော့ သူက ကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်ရင်း ကလေးငယ် တစ်ယောက်လို လက်လေးမြှောက်ပေးရှာတယ်။
တကယ့်ကိုပါပဲဗျာ ပန်းရောင် မွေ့ယာလေးပေါ်မှာ ဘော်လီ အသားရောင်လေးနဲ့ အတွင်းခံ ပန်းရောင်နုလေး ဝတ်ထားတဲ့ မိန်းမလှလေး တစ်ယောက်ပေါ့။ အတွန့်လေးတွေ ခွေနေတဲ့ ဆံပင်လေးတွေက ဖြူဝင်းတဲ့ ပုခုံးသား နုနုလေးပေါ်မှာ ဖွာတွဲကျလို့လေ။
တကယ့်ကို လင်မယားနှစ်ယောက်လို တိတ်ဆိတ်တဲ့ အခန်းလေးထဲမှာ အတူရှိနေတဲ့ အရသာက ကျုပ်ဘဝမှာ ပထမဆုံးပါပဲ။ တောသားဆိုတော့ တောသူပဲ လိုးဖူးတာကိုး။ အတူယှဉ်ပြီး ထိုင်နေတဲ့ ကျုပ်ရင်ခွင်ထဲကို မှီချလိုက်ရင်းနဲ့ ချွေးမလေးက
“ဖေဖေ… ဘယ်သူမှ မသိပါစေနဲ့နော်… သမီး တောင်းပန်ပါတယ်။”
ကျုပ်လေ သူလေးကို ကျုပ်မိန်းမပဲ ဖြစ်စေချင်တော့တယ်။ နွားအိုမြက်နုကြိုက်ဆိုတဲ့ စကားကို ကျုပ်အခုမှ ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်မိတာပေါ့။ ဒီအနုအရွလေးက ကျုပ်မိန်းမသာဆို သိပ်ကောင်းမှာ…။ ပြီးတော့ ကျုပ်သားကိုလည်း စိတ်ထဲက အားနာနေမိတယ်။
ထိုင်နေရင်းကနေ လှဲချလိုက်တဲ့ သူ့အပေါ်ကနေ ထပ်လိုက်တော့ သူ့လက်အိအိလေးတွေက နောက်ကျောဖက်ကို လျှိုရင်း ဘော်လီချိတ်လေးကို ဖြုတ်ပေးတယ်။ ပွင့်ထွက်လာတဲ့ နို့ကြီးတွေက အုန်းသီးနု တစ်ခြမ်းစာလောက် ရှိတာပေါ့။ ပက်လက်လှဲနေတဲ့ သူ့ပေါင်ကြားထဲမှာ ဒူးထောက်ထိုင်ရင်း သူ့အတွင်းခံလေးကို ချွတ်ပေးတော့ တင်လေးကို ကြွပေးရှာတယ်။
သူ့ပေါ် မှောက်လှဲချလိုက်တဲ့ ကျုပ်ကို သူလက်တွေနဲ့ ဆီးကြိုဖက်ရင်း ပေါင်ခြံပေါ် ထောက်နေတဲ့ ကျုပ်လီးကို သူ့လက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ပြီးတေ့ာ စောက်ပတ်ဝလေးကို တေ့ပေးနေတယ်။ ဝင်းအိနေတဲ့ သူ့နို့လေးတွေကို ကုန်းစို့ရင်း စောက်ပတ်ဝမှာ တေ့ထားတဲ့ ကျုပ်လီးနဲ့ ဖိချလိုက်တော့ အိခနဲ တိုးဝင်သွားတယ်။
တဲ့လေ….။ ကျုပ်ချွေးမလေးရဲ့ ညီးသံလေးနဲ့အတူ ကျုပ်လီးကလည်း သူ့စောက်ပတ် ဖောင်းဖောင်းလေးထဲကို နစ်ဝင်သွားခဲ့ပြီပေါ့။ ကျုပ်လီးက သူ့စောက်ပတ်လေးထဲမှာ လက်ဖဝါးနုနုလေးနဲ့ ဆုပ်ထားသလို တင်းကြပ်လို့နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ စောက်ဖုတ်အုံလေးက ဖောင်းအိပြီးတော့ စောက်ခေါင်းထဲက အရည်နွေးနွေးလေးတွေနဲ့ နူးအိနေလို့ လိုးရတာ မခက်ပဲ အရသာတွေ တထွေးကြီး ခံစားနေခဲ့ရတယ်။
ကျုပ်လည်း သူလေးရဲ့ ချိုင်းအောက်ကနေ လျှိုသွင်းပြီးတော့ ပုခုံးသား အိအိလေးကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင်းနဲ့ အိဖြူလေးရဲ့ စောက်ပတ်ထဲကို အချက်လေးငါးဆယ် ဆောင့်လိုးပြီး စလိုက်တယ်။ နောက်မှ ခပ်ဖွဖွလေး ညှောင့်နေတော့ အရသာမျိုးစုံ ခံစားနေရတဲ့ အိဖြူတစ်ယောက် ဖင်လေးကော့ကော့ပေးရင်း မွေ့ယာလေးပေါ်မှာ ကားကားလေး အလိုးခံနေရှာတယ်လေ။ စောက်ဖုတ်ထဲကို တစွပ်စွပ် တိုးဝင်နေတဲ့ အသံနဲ့ ဆီးခုံလေးနှစ်ခု တဖတ်ဖတ်ရိုက်သံတွေက အခန်းလေးထဲမှာ ပျံ့လွင့်လို့လေ။ ကျုပ်လည်း ကြမ်းတစ်ခါ နုတလှည့်နဲ့ ချွေးမလေးကို ကောင်းကောင်းကြီး ကာမအရသာတွေ ပေးနေမိတယ်။
ကျုပ်လည်း နုနုလှလှ တစ်တစ်ခဲခဲလေးကို လိုးနေရလို့ စိတ်မထိန်းနိုင်ပဲ အိလေး စောက်ခေါင်းထဲကို လရေတွေ ဒလဟော ပန်းထည့်လိုက်မိတယ်။ ကျုပ်ပြီးသွားတာသိတဲ့ အိလေးက ကျုပ်ကို တင်းတင်း ဖက်ပေးထားတယ်လေ။
“ဖေဖေကို စိတ်ဆိုးသွားလား သမီးရယ်”
“မဆိုးပါဘူး ဖေဖေရယ်… နှစ်ယောက်လုံးမှ မထိန်းနိုင်ကြတော့တာ ဘာစိတ်ဆိုးစရာရှိလဲ”
“ဖေဖေလည်း သမီးလေးကို အရင်ကတည်းက အရမ်းလိုးချင်နေမိတာ… ဒါကြောင့် ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုပြီး အရဲစွန့် လိုးမိတာပါ”
ကျုပ်ပြောတော့ ပြုံးနေတဲ့ အိလေးက ခြေရင်းမှာ ပုံနေတဲ့ သူ့ထမီလေးနဲ့ ပေါင်ကြားလေးကိုသုတ်ပြီး ကျုပ်လီးကိုပါ ဖွဖွလေး သုတ်ပေးရှာတယ်။
“သမီး ဖေဖေလီးက သမီးယောက်ျားဟာနဲ့ တူလား”
“ဟင့်အင်း ဖေဖေနဲ့ သားဆိုတဲ့ အတိုင်းပဲ …. ဟီး”
ပြောရင်း ရှက်ပြုံးလေးနဲ့ ရယ်နေတယ်လေ။
“သမီးလည်း ဖေဖေနဲ့မှ အားရမိတယ် ဘယ်နှခါ ပြီးသွားမှန်းတောင် မသိဘူး”
ပြောနေရင်း သူကိုယ်လုံးလေးကို ဆွဲလှဲချလိုက်တော့ ကျုပ်ရင်ခွင်လေးထဲကို ကလေးတစ်ယောက်လို ပြိုဆင်းလာတယ်။ ရင်ခွင်ထဲ ရောက်နေတဲ့ ချွေးမလေးကို ထွေးပွေ့ရင်း တင်းတင်းလေး အိစက်နေတဲ့ နို့ဖောင်းဖောင်းလေးတွေကို ပွတ်ချေလို့ အိဖြူလေးကိုခွရင်း အခန်းမှောင်မှောင်လေးထဲမှာ နှစ်ယောက်အတူ မိန်းနေမိတော့တယ်။
“သမီးလေးကို ချစ်တယ် သမီးရယ်”
“သမီးလည်း ဖေဖေ့ကို ချစ်ပါတယ်”
သူလေးက ကျုပ်ရဲ့ တရားဝင် မဟုတ်တဲ့ ဒုတိယ ချစ်ဇနီးလေးပေါ့။ ကျုပ် သူ့နှဖူးလေးအပေါ်ကို အနမ်းတစ်ပွင့် ချွေချလိုက်တော့တယ်။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 15,126
← ယောက်ျားမိန်းမ မဟူတည်း
ညီမလေးရယ် ကောင်းလိုက်တာ →